Nhau - Cation yekutsinhana resin ruzivo
Cation-exchange resins anoshandiswa kurapa hyperkalaemia nekukasira kurasikirwa kwe potassium kuburikidza neguvhu, kunyanya muchirevo chehurombo husina kubuda kana dialysis isati yasvika (ndiyo nzira inoshanda yekurapa hyperkalaemia). Iyo resin ine kuunganidzwa kwemahombekombe makuru asingasviki akatakura akasarudzika akaipa mhosva, ayo anosunungura zvakasununguka maoni akachajwa (cations); idzi dzinochinjana nyore nyore nekatoni munzvimbo inoyerera mvura kusvika padanho rinoenderana nekudyidzana kwavo nebwe uye kusangana kwavo.
Resins yakatakurwa nesodhiya kana calcium kuchinjanisa aya machete anosarudzika ne potassium cations mumatumbo (inenge 1 mmol potasium pag g resin); iyo yakasunungurwa cations (calcium kana sodium) inosanganiswa uye iyo resin pamwe yakasungwa potasium inopfuudzwa mumarara. Iyo resini haingodziviriri kunwiwa kweiyo yakadyiwa potasium, asi zvakare inotora iyo potasium inowanzovharirwa mumatumbo uye kazhinji inodzoswazve.
Mune hyperkalaemia, yekumuromo manejimendi kana yekuchengetedza enema ye polystyrene sulphonate resin inogona kushandiswa. Sodium-phase resin (Resonium A) haifanirwe kunge ichishandiswa mune varwere vane renal kana kukundikana kwemoyo sezvo kuwandisa kwesodium. Calcium-phase resin (Calcium Resonium) inogona kukonzera hypercalcaemia uye inofanirwa kudzivirirwa muvarwere vakafanorongerwa, semuenzaniso vane multiple myeloma, metastatic carcinoma, hyperparathyroidism uye sarcoidosis. Nepamuromo izvo hazvigadzike, uye seememas varwere havawanzo kugona kuzvichengeta kwenguva yakareba sezvazvinodiwa (dzinenge 9 h) kuchinjanisa potasium munzvimbo dzese dziripo pane resin.
Post nguva: Jun-24-2021